Raharaha tadiavina | NewsMada
Nombreuses infractions à la Kraoma : l’ancien directeur général interpellé ...janvier 22, 2020
Kitra – Antsapaka «Monidal 2022» faritra Afrika: vondrona «J», miaraka amin’RD Kongo, Bénin, Tanzania ...janvier 22, 2020
Par Taratra sur 16/08/2019
Hatahorana hirongatra indray ny valanaretina pesta na eo aza ny fandraisana andraikitra lehibe ataon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy mety fay ny Malagasy fa mitohy mandoro tanety raha vao manomboka maina ny toetry ny andro ka lasa mian-trano any an-tanàna ny voalavo. Ankoatra ny fanimbana ny tontolo iainana. Etsy andaniny, ny fako sy ny loto miparitaka etsy sy eroa. Mamoaka fofona maimbo sady manaratsy endrika ny tanàna rehetra saika manerana ny Nosy. Be ihany izay fanentanana natao izay ary tsy vao izao akory no fantatra fa ny fahadiovana no antoky ny fahasalamana. Saingy indrisy, tsy misy te-hahalala izany. Raha ny eto an-drenivohitra manokana aloha, miavosa ny fako. Tsy vita ny mandraoka azy ara-potoana fa tsy ampy ny kamiao hanao izany, hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny SAMVA rehefa hanontaniana. Ny olona tsirairay koa tsy manaja velively ny fandaminana hapetraka. Aoka anefa hazava fa izao savorovoro sy endrika ratsy izao dia mahasadaikatra ny mpizaha tany ho avy eto.
Ny mpivarotra amoron-dalana ohatra manaparitaka ny fakony ary mibahana ny arabe mampihitsoka ny fifamoivoizana. Lasa tsena foana na alahady aza. Raha raràna, mampiaka-peo hoe inona ary no hivelomanay eo e. Toy izany koa ny mpitarika posy sy sarety. Rehefa noferana ny fotoana handehanany sy ny lalana tokony sy tsy tokony halehany, nitora-bato mpitandro filaminana. Raha mbola tsy ho sahy hanafay ireo tsy tan-dalana ireo ny ben’ny Tanàna, tsy hisy fifanajana mihitsy eto.
Io fahadiovana sy fanadiovana io no tena mahamaika izao fa tsy ny ady seza politika tsy mitondra afa-tsy lonilony sy fankahalana. Ny firenena mandroso nanome lanja ny fahadiovana aloha fa tsy naniry voro-manidina ka asiana sira. Niainga tamin’ny zavatra tsotra, nandroso tamin’ny lafiny hafa. Tsy mino izany ny Malagasy fa dia maniry manitra ny an’ny hafa eto foana. Tsy dia hanova inona ny fifidianana mifanesy raha tsy ny vahoaka mihitsy no te-hiova. Rahoviana vao tena tonga saina?
Nombreuses infractions à la Kraoma : l’ancien directeur général interpellé 22/01/2020
Kitra – Antsapaka «Monidal 2022» faritra Afrika: vondrona «J», miaraka amin’RD Kongo, Bénin, Tanzania, ny Barea 22/01/2020
Kitra – Fikaonandoham-pirenena: nanao fakan-kevitra ireo komisiona 22/01/2020
Afrobasket Men: resin’i Madagasikara i Zimbaboe 22/01/2020
Toetr’andro: hiditra ao Melaky ilay andro ratsy 22/01/2020
Fakafaka: aman-jato taona, mitady ny very ihany